Iza moa i Josh Bowman? Ny momba ny vadin'i Emily VanCamp rehetra rehefa mandray ny zanany voalohany izy - Pop-Kolontsaina
Tamin'ny 26 Aogositra, Ny Falcon sy ny miaramila ririnina kintana Emily VanCamp dia niditra tao amin'ny Instagram hanambara ny fahatongavan'ny zanany voalohany. Ilay mpilalao sarimihetsika 35 taona, fantatra amin'ny filalaovana an'i Sharon Carter (Agent 13) ao amin'ny MCU , mizara Iris zanakavavy vao teraka tamin'i Josh Bowman vadiny.
Izao no voalaza ao amin'ny lahatsoratra:
Tongasoa eto amin'izao tontolo izao Iris kelinay malalany Feno ny fonay
Lahatsoratra zarain'i Emily VanCamp (@emilyvancamp)
Ny snap Instagram dia misy sarin'i Iris mitazona ny rantsan'i Emily na i Josh. Nisy sary iray hafa nanaraka, izay nahitana ny sarin'i Emily VanCamp niaraka tamin'i Josh vadiny nizara oroka raha mbola bevohoka izy.
Ireo mpivady dia niarahaba ny olo-malaza maro tao amin'ilay lahatsoratra, anisan'izany ny mpihira Edei, NCIS kintana Daniela Ruah, Shazam! kintana Marta Milans sy maro hafa.
Tantara fohy momba ny fifandraisan'i Emily VanCamp sy Josh Bowman
Ny mpivady dia nifandray tamin'ny fifandraisany tamim-pitiavana tamin'ny 2012. Nanamafy ny fifandraisan'izy ireo tamin'ny faran'ny taona 2012 i Emily tamin'ny resadresaka nifanaovana taminy Fahasalaman'ny vehivavy izay nisehoany teo amin'ny fonony. Nomarihin'ilay mpilalao sarimihetsika ho toy ny bandy mahafinaritra ao amin'ny resadresaka i Josh mpiara-miasa aminy.
Tamin'ny 12 May 2017, Emily VanCamp dia nanamafy ny fifamofoany tamin'i Josh Bowman. Nihaona tamin'ny andiana tantara an-tsehatra ABC izy mivady ny mamaly faty tamin'ny 2012, izay nilalaovan'izy ireo ny mpivady Emily Thorne sy Daniel Grayson.
tsy mieritreritra ny tsy hahita fitiavana aho
Emily VanCamp sy Josh Bowman dia nanambady tamin'ny tena fiainana tamin'ny 16 Desambra 2018 tao Bahamas.
ahoana no milalao mafy hahazoana zazalahy
Iza ny vadin'i Emily VanCamp, Josh Bowman?
Ny fampakaram-bady an-tsary an'i Emily VanCamp sy i Josh Bowman ao amin'ny Revenge (Sary tamin'ny alàlan'ny ABC)
Josh Bowman (aka Joshua Tobias Bowman) dia mpilalao anglisy 33 taona, malaza amin'ny fampisehoana an'i Daniel Grayson ao amin'ny ABC's ny mamaly faty . Teraka tao Berkshire, Angletera, tamin'ny 4 martsa 1988 ilay mpilalao.
ny Ny zazavavinay kintana dia nanao ny laharana voalohany tamin'ny sitcom britanika taona 2007 Genie ao an-trano , izay nanehoany an'i Dimitri / Royal Hunk tamin'ny fizarana roa. Bowman dia hita tamin'ny andraikitra niavaka tamin'ny taona 2009 BBC Tantara ara-pitsaboana iray Holby City , izay nilalaovany an'i Scott James tamin'ny fizarana sivy.
Joshua Josh Bowman koa dia niseho tamin'ny sarimihetsika kely tetibola telo, Amboadia alina , Mihaza ary sarimihetsika amin'ny fahitalavitra amintsika roa lahy , tamin'ny 2010. Taty aoriana tamin'ny 2011, niseho koa izy tamin'ny Ataovy na vakio , arahin'ny ny mamaly faty .
toetran'ny namana tsara az
Tamin'ny taona 2017, ilay mpilalao dia naneho ihany koa ny ahiahiana voalohany an'i Jack, ilay Ripper amin'ny tantaran'ny vanim-potoana sci-fi an'ny ABC, Fotoana aorian'ny fotoana . Nofoanana ilay andiany tamin'io taona io ihany.
Ny asan'i Bowman farany teo dia ny Dr. Antonio tao amin'ny andian-tsarimihetsika miaramila an'ny BBC One, Ny zazavavinay .
Na dia manana crédit 19 mihetsika aza ny mpilalao dia namokatra sy nitarika sarimihetsika fohy telo ( Eva, mpandeha alina SY Ilay Avaratra Lehibe ). Ankoatr'izay, Bowman dia nahazo fanolorana fanolorana loka roa ho an'ny tanora (tamin'ny 2012 sy 2013) noho ny anjara asany ny mamaly faty .
ny fomba fandroahana ex narcissist
ny fomba hialana amin'ny henatra
milaza amin'ny namanao fa tianao izy ireo
inona no dikan'ny hoe rehefa bandy miantso anao mahafatifaty amin'ny lahatsoratra